Las Vegas ရှိ NAB 2019 တွင် Cloud-based ဝန်ဆောင်မှုအသစ်နှင့်အသစ်ပြောင်းခြင်းအသစ်များကိုပြသရန် FileCatalyst NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » FileCatalyst Las Vegas မှာ NAB 2019 မှာနယူး cloud အခြေခံဝန်ဆောင်မှုနှင့် New အပ်ဒိတ်များခင်းကျင်းပြပေးပါရန်
FileCatalyst Las Vegas မှာ NAB 2019 မှာနယူး cloud အခြေခံဝန်ဆောင်မှုနှင့် New အပ်ဒိတ်များခင်းကျင်းပြပေးပါရန်
အော့တဝါ, ON - FileCatalyst, စီမံခန့်ခွဲဖိုင်လွှဲပြောင်းအတွက်Emmy®ဆုရရှေ့ဆောင်တစ်ဦးကမ္ဘာ့ဦးဆောင်အရှိန်ဖိုင်လွှဲပြောင်းဖြေရှင်းချက်အသစ်တစ်ခု cloud-based ဝန်ဆောင်မှုစတင်ပါလိမ့်မည်, FileCatalyst Spaces အဖြစ်သူတို့ရဲ့အစာရှောင်ခြင်း file ကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့ updates များကို ဖြေရှင်းချက် suite ကို at NAB 2019 အဆိုပါ Las Vegas မှကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာအတွင်းဧပြီ 6-11 မှ။
FileCatalyst တည်ရှိသောလိမ့်မည် Booth SL12116 နှင့်လူသိရှင်ကြားသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံး cloud-based ဖိုင်လွှဲပြောင်းဝန်ဆောင်မှုစတင် FileCatalyst Spaces. FileCatalyst Spaces ကုမ္ပဏီများသည်အပြည့်အဝလိုင်းမှာဖိုင်တွေမျှဝေဖို့ခွင့်ပြုမယ့်အပြည့်အဝစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်တည်ခင်းဧည် service ကရှေ့ပြေး software ကိုကုန်ကျစရိတ်ပေးဆောင်ခြင်းမရှိဘဲသူတို့၏မူပိုင်ခွင့်အစာရှောင်ဖိုင်လွှဲပြောင်းနည်းပညာသုံးပြီးအမြန်နှုန်းဖြစ်ပါတယ် - စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကုန်ကျစရိတ်မရှိဘဲတစ်ဦးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြေရှင်းချက်ပေး။
FileCatalyst Spaces ဆိုကို browser ကနေလက်လှမ်းသောကြေးပေးသွင်း-based ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဖောက်သည်များသာသူတို့ဖန်တီးအသုံးပြုသူများကသူတို့ရွေးချယ် optional ကို features နဲ့သူတို့လွှဲပြောင်းဒေတာပမာဏ၏နံပါတ်များအတွက်လစဉ်ကြေးပေးဆောင်ဖို့ရှိသည်။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သိုလှောင်မှုရွေးချယ်စရာအသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ပေးအပ်သည်မိုဃ်းတိမ်သိုလှောင်မှုသုံးစွဲဖို့ဖြစ်စေခွင့်ပြု FileCatalyst Spaces သို့မဟုတ် Wasabi, AWS S3, Azure မိတ်ဆွေအတွက် blobs, Google Cloud သိုလှောင်မှုနှင့် Backblaze B2 အပါအဝင်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Cloud သိုလှောင်မှုဆောင်ခဲ့ရမည်။
မှထူးခြားသောအခြို့သော Key ကို features တွေ FileCatalyst Spaces ပါဝင်သည်:
custom လွှတ်တင်ခြင်း Form များ: နီးပါးမည်သည့်အကြီးစားဖိုင်လွှဲပြောင်းလုပ်ငန်းအသွားအလာလက်ခံပေးနိုင်ရန်, အလုပ်တင်ပြဘို့ထုံးစံ metadata ကိုလယ်ကွင်းဖန်တီးပါ။
Shareable web-based Folders: share နဲ့ကြီးမားတဲ့ဒေတာအစုအပေါ်ပူးပေါင်းအသုံးပြုသူများနှင့်အုပ်စုများအတွက် shareable ဖိုလ်ဒါဖန်တီးပါ။
automated Transfers: FileCatalyst HotFolder add-on တစ်ခုအင်္ဂါရပ်အလိုအလျောက်များနှင့်ထပ်တူတာဝန်များကိုများအတွက်အဖြစ်ရရှိနိုင်ပါသည်။
စိတ်ကြိုက် Web Portal: ထူးခြားသောအသုံးပြုမှုဖြစ်ပွားမှုများအတွက်ဖိုင်မျိုးစုံကိုလွှဲပြောင်းတွင်ကျယ်စွာဖန်တီးပါ။
Brandable: ကျယ်ပြန့် HTML5 စိတ်ကြိုက် features တွေသင်ကိုက်ညီမှုတစ်ခုဗေဒကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြု FileCatalyst သင့်ရဲ့ကော်ပိုရိတ်ဝိသေသလက္ခဏာနှင့်အတူ Spaces ။
၏ Launch အပြင် FileCatalyst spaces, FileCatalyst မီးမောင်းထိုးပြလိမ့်မည်:
၏အသစ်ဖြန့်ချိ FileCatalyst လုပ်ငန်းအသွားအလာ (v5.0) အပါအဝင် features တွေနှင့်အတူ:
နယူးနှင့်တိုးတက်ဆုံးကိုအသုံးပြုသူများနှင့်စီမံခန့်ခွဲသူ interfaces ။
နက်ရှိုင်းစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခု All-အသစ်က template engine ကို။
မှမိတ်ဆက်နယူးအင်္ဂါရပ်များ FileCatalyst တိုက်ရိုက် (v3.7.3) အပါအဝင်:
Google Cloud သိုလှောင်မှုနှင့် Backblaze B2 များအတွက်တရားဝင် EFS နဲ (ပြင်ပ File System) ထောက်ခံမှု။
client software တစ်ခုသို့မဟုတ် plugins ကိုမလိုအပ်ပါဘူးအသစ်ရိုးရှင်းသောသည် HTTP အပ်လုဒ်ဒါ။
အသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏ဥပမာအားစောင့်ရှောက်ဖို့ခွင့်ပြုတဲ့သစ်ကို Reverse Proxy အင်္ဂါရပ် FileCatalyst အများပြည်သူအင်တာနက်ကနေခွဲထုတ်ဆာဗာ။
On-the-fly ဖိုင်တစ်ဖိုင်လွှဲပြောင်း၏ဦးစားပေးပြောင်းလဲပစ်ရန်အသစ် "ဦးစားပေး Bump" အင်္ဂါရပ်။
, Las Vegas မှာ NAB 2019 မတက်ရောက်သူတို့အဘို့နှင့်ပိုပြီးလေ့လာသင်ယူရန်လိုခငျြ FileCatalyst ဧပြီလ 12116-6 ကနေ Booth SL11 အတွက်ပြပါလိမ့်မည်။ အလည်အပတ် FileCatalyst'' s ကို အဖြစ်အပျက်စာမျက်နှာ နှငျ့ "စာအုပ်ကြှနျုပျတို့ကိုအတူတွေ့မယ့်အချိန်" ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးနှင့်အတူအစည်းအဝေးတစ်ခုစီစဉ်ဖို့အပိုင်းကိုထုတ်ဖြည့်ပါ။
သငျသညျသေး NAB 2019 တက်ရောက်ရန်မှတ်ပုံမတင်လျှင်, ရန်ပတ်စ်ကုတ် LV4685 ကိုသုံးပါ အခမဲ့ဖြတ်သန်းရ 2019 NAB မှ (မတ်လ 24th သည်အထိသက်တမ်းရှိ, code ကိုထို့နောက် 50 $ လျှော့စျေးဖြစ်လာသည်) ။
အော့တဝါ, ကနေဒါ, တည်ရှိသော FileCatalyst စီမံခန့်ခွဲဖိုင်လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်အရှိန်မြှဖိုင်လွှဲပြောင်းဖြေရှင်းချက်တစ်ခုEmmy®ဆုရခေါင်းဆောင်တစ်ဦးရှေ့ဆောင်သည်။ 2000 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးအဆိုပါကုမ္ပဏီ, တစ်ဦးထက်ပိုတထောင်မီဒီယာ & ဖျော်ဖြေရေးအတွက်ဖောက်သည်များ, စွမ်းအင် & သတ္တုတူးဖော်ရေး, ဂိမ်း, ပုံနှိပ်ခြင်း, စစ်ရေး, များပြား Fortune မဂ္ဂဇင်း 500 ကုမ္ပဏီများအပါအဝင်အစိုးရရှိပါတယ်။
FileCatalyst လုံလုံခြုံခြုံနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖိုင်လွှဲပြောင်းအရှိန်အဟုန်မြှင့်ခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲဖို့ဒီဇိုင်းဆော့ဖ်ဝဲပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ FileCatalyst အောင်းနေချိန်နှင့် packet ကိုအရှုံး FTP, HTTP ကိုသို့မဟုတ် CIFS အပါအဝင်ရိုးရာဖိုင်လွှဲပြောင်းနည်းလမ်းများအပေါ်ရှိသည်သောဆိုးကျိုးများမှကိုယ်ခံစွမ်းအားဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများကိုသုံးပါ FileCatalyst ပါဝင်မှုများဖြန့်ဝေခြင်း၊ ဖိုင်ဝေမျှခြင်းနှင့်အပြင်ဘက်အရန်ကူးခြင်းများအပါအ ၀ င်ဖိုင်ပြောင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောပြissuesနာများကိုဖြေရှင်းရန်။ ပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန် www ကိုသွား။filecatalyst.com သို့မဟုတ် Twitter @ ပေါ်တွင်FileCatalyst.
10 Gbps အရှိန်ဖိုင်လွှဲပြောင်း Aspera aspera အခြားရွေးချယ်စရာ Big Data မိုဃ်းတိမ်ကို အကြောင်းအရာ အကြောင်းအရာ Delivery ဒေတာခွဲဝေမှု အစာရှောင်ခြင်းဖိုင်မှတ်တမ်းလွှဲပြောင်း FileCatalyst တယောက်က FTP FTP ကိုအခြားနည်းလမ်း မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကွန်ပျူတာ အစာရှောင်ခြင်းဖိုင်တွေလွှဲပြောင်းရန်မည်သို့မည်ပုံ iot ကြီးမားတဲ့ file ကိုလွှဲပြောင်း ဘဝသိပ္ပံ ပေးခဲ့သည် မီဒီယာ & ထုတ်လွှင့် မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု object သိုလှောင် SaaS Signiant signiant အခြားရွေးချယ်စရာ UDP ကို Workflows 2019-02-20
ယခင်: TVU ကွန်ယက်မီဒီယာ Supply Chain ပလက်ဖောင်းမှအပ်ဒိတ်များမိတ်ဆက်ဖို့
နောက်တစ်ခု: ဓါတ်ပုံပညာနှင့်ဗီဒီယို Editor ကို / စတူဒီယိုလက်ထောက်